Xeon waa emulator ah in ay si gooni ah loogu talagalay madal X-sanduuqa. X-box waa Console lagu sameeyo Microsoft, Inc. Waxa uu isticmaalaa modified x86 hardware socon oo sidaas waxaa suurto gal ah in ay qoraan emulator ah waxaa loogu talagalay. Waxay ahayd X-box emulator ugu horeysay in uu ordo kulan ganacsiga Halo NTSC version. Xeon waa emulator X-BOX ah oo loogu talogalay PC iyo hadda waxa ay taageertaa hal kulan ganacsiga iyo taageero dheeraad ah lagu dari doono mustaqbalka si wadajir ah ula qaababka kale ee wanaagsanaaday. Waayo, waxaa si fiican in uu ordo, waxaa lagu talinayaa in ay soo socda:
Pentium 4.2 GHZ
Talinayo video kaararka: FX GeForce ama Radeon 9200 Pro ama wax ka sareeya.
Xeon leeyahay calaamadaha ka mid ah 7.5 (16886 votes) oo lagala soo bixi karaa download ka link soo socda: http://www.emulator-zone.com/doc.php/xbox/xeon.html
Faa'iidooyinka Xeon Emulators
Emulator for Windows laakiin sidoo kale la jaan qaada MS-Dos
Waxaa ka mid ah Madaxweyne Siilaanyo Oo abuure kaabta iyo barnaamijyada xISO iyo sidoo kale tilmaamaha dega Khayaadka oo kulan.
Qasaaraha Xeon Emulators
Emulates kulan kaliya Halo
Development of software this waa la joojiyey.
Madaxweyne Siilaanyo Oo Games diyaar u Xeon Emulator.
Xeon laga yaabaa inay tahay emulator ugu fiican ee Microsoft Windows, taas oo ka dhigi Crore ah ka mid ah ayaa isagana. Waxay leedahay heer inta ka sareeya ka mid ah xasiloonida ka badan emulators kale. Tani emulator waqtiga sii daayo ahaa la yaab leh in qof kasta. Waxaa bilowday kulankii ganacsiga Halo-NTSC version ugu horeysay oo ugu danbeyn ku joogsaday.
Halo- ciyaarta weerarka Spartan waxaa sameeyay 343 warshadaha lala kulan ku baahiso.
Waxa ay ku lug entries gasho caalamka HALO turxaan bixinta dhex marayay magaalooyin iyo hawdka isticmaalaya Arsenal ba'an ee hubka. Waxaa ku lug leedahay howlgalada badan oo dagaal kula diriraan cadaawayaashooda oo cusub si ay dhulka uga badbaadiyo Layna Haleelay.
Muuqaalada Top of Halo
Kartida aad cadaawayaashiinna isku burburin isticmaalaya warthog halyeey ama howlgal ka dagaallanto goobaha dagaalka.
Toos off cadowga Promethean oo doonaya in uu baabi'in Dadka.
Waayo aragnimada sheeko cusub oo aad ka Mombasa qaadan doonaa dhulka bannaan.
La wadaag horumar u dhexeeya daaqadaha 8 iyo qalabka telefoonka daaqadaha aad.
Heli guulaha ee Halo. (Habkaani waxaa laga heli karaa oo keliya in daaqadaha 8)
Sida loo soo bixi ROMS kulan emulators Xeon
Files Emulator waxaa inta badan qurbo software antivirus iyo la ogaado sida furin (fayrusyada, kolkaasaa dirxi galay, iwm) No u werwero. Tani had iyo jeer waa digniin been ah. In Madaxweyne Siilaanyo Oo ama Playstation, sawirada disk waxaa loo yaqaan ISOS oo aad u baahan doontaa inaad iyaga soo bixi website a torrent sida KickAssTorrents. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa bogga internetka ee hoos ku qoran.
Sida loo isticmaalo Xeon Emulators inuu ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo
Madaxweyne Siilaanyo Oo waa mid ka mid ah consoles'ka ugu adag in la abuuro emulator ah oo loogu talogalay, sida Details ay yihiin kuwo aad u culus. Sida ay tahay inta badan kiiska, dhibaatada ugu weyn ee aanu arintii waa la'aanta barnaamij ku habboon in uu ordo kulan ganacsi oo la isticmaalayo files ay ISO. Emulators ha ka jira in tani ay samayn karto si fiican sida Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 emulator, si kastaba ha ahaatee emulator Xeon waa ugu fiican oo ugu kalsoonaan karo, waana ka ciyaari kara ayaa kulan aad ka heshaan dukaanka xitaa haddii ay heerka taageerada weli waa ku yar yahay.
Si aad u isticmaasho emulator Xeon inuu ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo, habka soo socda waa in la raacaa:
Tag website-ka emulator- zone.com. Riix 'Microsoft Madaxweyne Siilaanyo Oo' link dhamaadka bidix ee shaashadda.
Laga soo bilaabo liiska, dooran emulator Xeon ah. Waxa kale oo aad ka heli doontaa Details Madaxweyne Siilaanyo Oo on this page ay dhacdo in aad rabto in aad is barbar awoodaha ay la PC.
Xeon 1.0 doortay ka mid ah liiska. Waa ciyaaro ganacsi la Halo NTSC version isagoo mid ka mid ah emulator kaliya.
Riix download faylka. File waxaa lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC doonaa si loo hubiyo in la abuuro folder cusub ka hor inta aadan isku dayin in ay decompress.
Si aad u ordaan kulan ISO ah, si fudud u jiidi oo iyaga hoos u codsiga. Waxaad kaloo isticmaali kartaa "Open" ikhtiyaarka barnaamijka.
Marka la isticmaalayo emulator ah, waxaa lagu talinayaa in la xiro codsi kasta oo aan loo baahnayn si buuxda u isticmaalo awoodda processor aad.
Resources kale ee Xeon Emulators
Sida loo dayactir Khaladaadka Xeon Emulators
Waxaa laga yaabaa inaad hesho qalad ku xusan halka adiga oo isticmaaleya isticmaale emulator ama mid ka mid ah khaladaadka hoos ku qoran.
Xeon emulator.exe Windows rakibayo Khaladaadka
Xeon maqan emulator.exe Khaladaadka ActiveX
Windows Khaladaadka xawaaladaha emulator.exe xeon
Windows Khaladaadka Runtime emulator.exe xeon
Windows xeon emulator.exe Khaladaadka IExplore iyo System32
Windows xeon emulator.exe Khaladaadka Dr Watson
Khaladaadka Driver emulator.exe xeon Windows
Emulator.exe Xeon lama hubin. Isku day reinstalling [Program ama magaca codsiga] - Eeg more at: http://www.pcerrorsfix.org/howtofix/fix-xeon%20emulator.exe-error.html#sthash.mpaoPlUu.dpuf
Taasi waxaa keeni kara maqan, jabay, emulator Xeon misconfigured. File Exe ama xataa qaba virus ama furin. Si aad u hagaajin khaladaad kuwan, xalku yahay in la bedelo mid cusub oo ay kaga dayanayaan ka nidaam kale ka emulator.exe ka Xeon isla ama dib codsi gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan Galliani IT ah, oo aad ka heli kartaa in ay adag tahay in dhibta dhibaatada gaar ahaan kiisaska diiwaanka Windows ku lug leh. Si aad u badbaadin Jahwareer ah, waxaa lagu talinayaa inaad kala soo baxdo emulator Xeon ah. exe Tool Fix Error hoose oo si fiican u falanqeeyaan doonaa Xunyahay xaliyo si toos ah.
Diiwaanka Windows leeyahay kaalin uga dan laakiin muhiim ah in dhammaan daaqadaha ka hawlgala nidaamyada. Waa goobaha in this diiwaanka in ay go'aamiso sida kombiyuutaro daaqadaha u muuqdaan iyo sida ay u dhaqmaan. Tallaabooyinka hoos ku qoran waa in la raacaa si loo xaliyo Xeon Windows ka emulator.exe Error:
Talaabada 1: Download iyo rakibi daaqadaha qalab baadi dhalato. Waxaad ku heli kartaa xiriirka hoose: http://www.pcerrorsfix.org/howtofix/fix-xeon%20emulator.exe-error.html
Talaabada 2: Guji "Start hadda iskaan badhanka"
Talaabada 3: Riix hagaajin button oo dhan inay si buuxda u hagaajin khalad.
> Resource > Emulator > Sida loo isticmaalo Xeon Emulator inuu ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo on PC?